သင်တစ်ယောက်တည်းလား ရာသီ 1 ပြိုင်ပွဲဝင်: သူတို့အဘယ်မှာရှိသနည်း - တီဗီ
သင်တစ်ယောက်တည်းလား ရာသီ 1 ပြိုင်ပွဲဝင်: သူတို့အဘယ်မှာရှိသနည်း
သင်တစ်ယောက်တည်းလား ရာသီ ၆ - MTVPress
Netflix ရုပ်ရှင်: ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံး Netflix ပြဇာတ် ၅ ခု7ကောင်းသော Netflix သည်ခရစ်စမတ်အကြို 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ပြသသည်
မင်းကနေ Amber နဲ့ Ethan တို့လား။ အခု
- AMBER DIAMOND မှ - (@amberleediamond) မျှဝေသည့် post ကို။
Amber Lee Diamond နှင့် Ethan Diamond တို့သည်အတူတကွယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကလေးနှစ်ယောက်နှင့်အမှန်တကယ်လက်ထပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ Instagram ၏ post ကိုကြည့်ပါ။
Adam Kuhn သည်တက္ကဆက်ပြည်နယ် Austin တွင်နေထိုင်သည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသူ 2019 ခုနှစ်ကတည်းက Instagram ကိုတင်ထားတာမရှိသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူ့ Instagram Story ကတဆင့်တက်ကြွနေဆဲပါ။ သငျသညျသူ၏စာမျက်နှာထွက်စစ်ဆေးနိုင်သည် ဒီမှာ ။
Shanley McIntee သည် Instagram ကိုအလွန်လှုပ်ရှားသည်။ သူမသည်၏ပထမရာသီကတည်းကမော်ကွန်းစတိုင်ပြောင်းလဲမှုမှတဆင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်လား။ ထုတ်လွှင့်ခြင်း, သူမစိတ်ကူးကြည့်ရှုသည်။ သူမသည်စင်မြင့်ပေါ်တွင်နောက်လိုက် ၁၇၇၀၀၀ နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ သင်သူမ၏စာမျက်နှာထွက်စစ်ဆေးနိုင်သည် ဒီမှာ ။
You Are The One မှခရစ်အက်စ် အခု
ခရစ် Scali သည်နယူးယောက်၊ ဘရွတ်ကလင်တွင်နေထိုင်သည်။ သူသည် WOMME အက်ပလီကေးရှင်းကိုတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်ပြီးသူ၏မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးခြင်းနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ချိတ်ဆွဲခြင်းဓာတ်ပုံများကိုမကြာခဏမျှဝေသည်။ သူ၏ Instagram စာမျက်နှာကိုသင်ကြည့်နိုင်သည် ဒီမှာ ။
Jacy မှသင်တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းလော အခု
Jacy Rodriguez သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ပန်းချီဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည် Instagram စာမျက်နှာ သူမ၏အလုပ်အတွက်။ သူမ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိများအရသူမသည်အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပြီးလူမှုမီဒီယာတွင်အလွန်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ သူမသည် selfies နှင့် TikTok ဗွီဒီယိုများကိုမကြာခဏမျှဝေသည်။ သူမစာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်တယ် ဒီမှာ ။
You Are The One မှခရစ်တီတီ အခု
ခရစ် Tolleson အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တစ်ခုရှိပါတယ် ကိုယ်ပိုင် Instagram ပရိုဖိုင်း ဒါကြောင့်ငါတို့သူ့ကိုအများကြီးနောက်ယောင်ခံလို့မရပါဘူး! အရ Touch အပတ်စဉ်၌ ခရစ်သည်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး တွင်ကားများရောင်းရသည်။ သူကမီးမောင်းထိုးထွက်နေဖို့ကြိုးစားနေရဲ့နဲ့တူထက်အခြားကကြည့်ရှုသည်။
မင်းက The Paig from the Paige အခု
igePaige Cole⚡️ (@paige_cole) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ရိုးရိုးလိင်ဆန်သူအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာသည့် Paige Cole ဟုတ်လား။ , MTV အပေါ်သူမ၏လက်ထက်မှစ။ တိုးတက်ခဲ့သည်။ သူမ၏ Instagram စာမျက်နှာမှသင်ပြောနိုင်သည့်အတိုင်းသူသည်ကချေသည်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူမသည်တိုင်အားအလုပ်လုပ်နေသောသူ့ကိုယ်သူဗွီဒီယိုများကိုမကြာခဏဝေမျှသည်။ သူမက selfies နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုဆိုင်ရာရေးသားချက်များကိုမျှဝေသည်။ သူမ၏စာမျက်နှာထွက်စစ်ဆေးပါ ဒီမှာ ။
Dillan မှမင်းက The One လား အခု
Dillan Ostrom သည် Instagram ပေါ်တွင်လူရွှင်တော်တစ် ဦး ဖြစ်ပုံရသည်။ (တရားဝင်မဟုတ်ပေမယ့်ရယ်စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးလုပ်တယ်) ။ Season 1 alum သည်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဇယားအရမင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏စာမျက်နှာပေါ်ရှိမြင်ကွင်းများနှင့်မြင်ကွင်းများကိုသူမြင်တွေ့ရကြောင်းသင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သူ၌လက်ရှိ ၁၅၅၀၀ နောက်လိုက်ရှိသည့်သူ၏အကောင့်ကိုစစ်ဆေးရန်စစ်ဆေးပါ ဒီမှာလင့်ခ် ။
marcella ရာသီ2netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
Coleysia မှမင်းကမင်းလား အခု
သူတို့ဟာအတိတ်ဖြစ်ခြင်းကြာမြင့်ခဲ့ကြပေလိမ့်မည် ဟုတ်လား။ ပွဲစဉ်များ၊ ပွဲစဉ်များအပြန်အလှန်ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြသော်လည်း Dillan နှင့် Coleysia Chestnut တို့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုရှိသည်ဟုထင်ရသည်။ Coleysia သည်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကိုယ်ပိုင်အကူအညီစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့သည်။ Exhale ဂျာနယ် ။ သူမလည်းပါပဲ အမေ တစ် ဦး ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောကလေးယောက်ျားလေးမှ။ သူမနောက်လိုက်ပေါင်း ၂၀,၉၀၀ ရှိသည့်သူမ၏ Instagram စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးရန်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ။
မင်းက The One လား အခု
Andrean McCoy (a.k.a. Dre) သည် Instagram ပေါ်တွင်အမှန်တကယ်မလှုပ်ရှားပါ။ သူသည်ယနေ့ခေတ်မီးမောင်းထိုးခြင်းမှအရေးယူခြင်းတွင်ပျောက်ဆုံးနေသည်။ အရ Touch အပတ်စဉ်၌ နောက်ဆုံးသူဟာဂျော်ဂျီယာ၊ အတ္တလန်တာမြို့ကပြဇာတ်ရုံမှာသရုပ်ဆောင်နေတာကိုသူတို့ကြားခဲ့ရတယ်
ဆီမွန်ကယ်လီဟာသူမအချိန်ကတည်းကပိုကြီးပြီးပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ် သင်တစ်ယောက်တည်းလား ။ သငျသညျသူမ၏ခေါင်းပါ Instagram ပရိုဖိုင်း သူမပါရမီရှင်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သူမ၏လက်ရှိလမ်းကြောင်းကို Sexting ကို iTunes, Spotify, Tidal နှင့်သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရနိုင်သည်။ သူမသည် Instagram ပေါ်တွင် 29700 နောက်လိုက်ရှိတယ်, သူသည်ဆက်ဆက်ကြယ်တစ်လုံးပါပဲ။
Simone ကဲ့သို့ပင် John Jacobs သည်ဂီတပညာရှင်လည်းဖြစ်သည်။ The ဟုတ်လား။ alum ကိုခေါ်မယ့်အယ်လ်ဘမ်ရှိပါတယ် တစ်ခုတည်းသော ။ မိမိအ Instagram ကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်အခြေခံသည် မင်းဒီမှာတွေ့နိုင်တယ် John သည် stand-up ဟာသကိုမကြာခဏဖျော်ဖြေလေ့ရှိပြီး MTV ပွဲတွင်ပါဝင်သကဲ့သို့သူသည်ပျော်စရာကောင်းသည်ဟုထင်ရသည်။
သင်မှ The Ashleigh ထံမှလား အခု
အက်ရှလေ Morghan (@ashleighmorghan) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
Ashleigh Feaster သည်သူမအနေဖြင့်ဖျော်ဖြေမှုလောကတွင်ပါဝင်ခဲ့သည် ဟုတ်လား။ အများကြီးသူမ၏ယခင် Co- ကြယ်ပွကဲ့သို့များစွာသော။ တီဗီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်မင်းသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် ။ သူမ၏ Instagram ဇီဝအဆိုအရသူမလည်း over-over မင်းသမီးပါပဲ။ ဘယ်လောက်အေးလိုက်မလဲ။ နောက်လိုက် ၃၈,၃၀၀ ရှိသည့်သူမ၏စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုရန် ဒီမှာလင့်ခ် ။
သင်က The One ကနေ Joey? အခု
ရာသီ 1 ကနေ Joey Dillon Instagram ကိုအပေါ်တူသောဒါဟာမကြည့်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကဖြစ်ပါတယ် တွစ်တာပေါ်မှာ ! ယနေ့ခေတ်တွင် MTV ကြယ်ပွင့်သည်စွန့် ဦး တီထွင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပုံရပြီးယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်သူစတင်မိတ်ဆက်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် အစိမ်းရောင်ဘဝကမ်ပိန်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့စစ်ပြန်ကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်သည်။
မင်းက The Brittany ကနေ Brittany လား အခု
၂၀၂၀ မှာ Brittany Baldassari ကဒီဂိမ်းကိုသတ်နေတယ်။ သူမ၏ Instagram ပရိုဖိုင်း၏အဆိုအရယခင်ပြိုင်ပွဲဝင်သည်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးလူနေမှုပုံစံနှင့်အားကစား Podcast တခုကိုလက်ခံသူဖြစ်သည် BosBabes အားကစား ။ သူမသည်သြဇာညောင်းသောဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်ပြီးသူမ၏စာမျက်နှာတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုရေးသားထားသည်။ သူမနောက်လိုက် ၄၉၅၀၀ ရှိသည့်သူမ၏ Instagram ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ဒီမှာ ။
ရိုင်ယန် Malaty ရဲ့ Instagram ကိုစာမျက်နှာ per, ဒီယခင်အဖြစ်မှန်ကြယ်ပွင့်အပေါ်သူ၏အချိန်အပြီးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည် ဟုတ်လား။ ။ သူက ပေါ်လာတယ် ပြပွဲများတွင် လူငယ် Daze , My Dead Ex နှင့် တစ်ချိန်က ရုပ်ရှင်နှင့်အတူ ငါ့မင်္ဂလာဆောင်နှစ် ။ သူ၏နောက်လိုက် ၅၂,၃၀၀ ရှိသောသူ၏စာမျက်နှာကိုကြည့်နိုင်သည်။ ဒီမှာ ။
netflix streaming အပေါ်အရှည်ဆုံးရုပ်ရှင်
Are You The One မှဂျက်စီကာ? အခု
ထွက်ခွာကတည်းက ဟုတ်လား။ , Jessica Perez Prongay သည်ဇနီးနှင့်အမေဖြစ်လာသည်။ သူမ၏ထွက်စစ်ဆေးပါ Instagram စာမျက်နှာ သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်ကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်သူမ၏မိသားစု၏ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်။ သူမသည်ကြံ့ခိုင်ရေးတွင်ပါဝင်ပြီးသူမ၏အစာမှဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုများကိုလေ့ကျင့်သည်။
သင်ထံမှ Wes သင် The One လား အခု
Wes Buckles သည် MTV စီးရီးများဖြင့်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အချိန်ကတည်းကပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏အဆိုအရ Instagram စာမျက်နှာ သူသည်ချီကာဂိုရှိဆေးဝါးများတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သူလည်းသည်သူ၏ဇီဝနှုန်း, တစ် ဦး ဆရာရဲ့, သူသည်မကြာခဏစိတ်ခွန်အားနိုးဆွေးနွေးမှုများပေးခြင်းမိမိကိုမိမိဗီဒီယိုများဝေမျှပေးသည်။
မင်းကနေ Kayla လား။ အခု
Kayla Lusby သည်လက်ထပ်ပြီးယခု Kayla Bertucci နှင့်လက်ထပ်လိုက်သည်။ အံ့သြစရာကသူမလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာတက်ကြွစွာနဲ့တူပေမယ့်ငါတို့သူမ၏ဘဝ - Post- အဖြစ်မှန်တီဗီအတွက်အကောင်းဆုံးဆန္ဒရှိ!
နောက်တစ်ခု:2020 အကောင်းဆုံး7Netflix မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
ဤတွင်ပိုမိုရာသီမျှော်လင့်ပါတယ် ဟုတ်လား။ မကြာမီ Netflix တွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်!
Netflix အပေါ် keanu Reeves ရုပ်ရှင်တွေ
ငါ၏အပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်ရာသီ2ထွက်လာမယ့်အခါ
netflix ရှိ x ဖိုင်များဖြစ်သည်
မနက်ဖြန် Netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ၏ဒဏ္ဍာရီ
ရာသီ 8 ထွက်လာမယ့်အခါ
အဆိုပါမွေးမြူရေးခြံ Netflix ရာသီ2လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ